मलाइ नेपाल र नेपाली मनपर्छ
कुटनीति क्षेत्रमा ११ वर्षदेखि कार्यरत एण्डी डि आरमेन्ट अमेरिकी राजदुतावास काठमाडौको प्रवक्ता हुनुहुन्छ । नेपाली भाषा, संस्कार र संस्कृति प्रति विशेष लगाव राख्नुहुने उहाँले नेपाली भाषाको गित पनि गाउनुभएको छ। इण्डोनेसियाबाट आफ्नो कुटनीतिक करियर शुरु गर्नुभएका उहाँले भारत, पाकिस्तानमा आफ्नो सेवाको समय व्यतित गरिसक्नुभएको छ । २० महिना देखि नेपालमा रहनुभएका उहाँसँग नेपाल र नेपाली संस्कृतिका विषयमा गरिएको कुराकानी ।
नेपाल आउनु भएको कति भयो ?
म नेपाल आएको लगभग २० महिना भयो । तर मलाई नेपाल बसेको समय धेरै छिटो गएको जस्तो भइरहेको छ । किनभने धेरै किसिमका कार्यक्रमहरु छन् । धेरै रचनात्मक कामहरु गर्ने अवसरहरु मिल्यो । यहाँको सौन्दर्यताले गर्दा पनि नेपाल बसाईको समय धेरै छिटो गएको जस्तो महसुस गरेको छु ।
नेपालको बसाइ कस्तो हुदैछ ?
मलाई नेपाल धेरै मनपर्छ । नेपाली खाना, नेपाली जनता, नेपाली कला, नेपाली गीतले साँच्चै मलाई लोभ्याएको छ । धेरै फरक किसिमको नेपाली संस्कृति पनि मलाई धेरै मनपर्छ । मेरो विचारमा नेपाल धेरै विविधतापुर्ण देश हो । हरेक ठाउँको आफ्नै किसिमको विशेषता छ । जस्तै नेपालगञ्ज र लमजुङ्गको विचमा भौगोलिक र साँस्कृतिक दुवै दृष्टिकोणले फरक छन् । यो किसिमको विविधता एकदम चाखलाग्दो छ । मलाई प्रकृति मनपर्छ । मलाई संस्कृति पनि मनपर्छ । त्यसैले मेरो नेपाल बसाई पनि यहाँको संस्कृति, भुगोल र आतिथ्यताले आनन्दमय बनेको छ ।
प्रेम र जीवनको संबन्ध गहिरो हुन्छ । प्रेमले कुनै पनि मानिसलाई खुसी बनाउछ । यो सर्वव्यापी छ । सबैले सबैलाई प्रेम गर्नु जीवन हो ।
नेपालको कुन कुन ठाउँ घुम्नुभएको छ ?
नेपालको धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छु । कामको दौरानमा तथा घुम्ने उद्धेश्यले पनि धेरै ठाउँ घुमिसकेको छु । भैरहवा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, लमजुङ्ग, हेटौंडा, जनकपुर, काठमाण्डौं वरिपरी, सिन्धुपाल्चोक, काभे्र, नगरकोट, नुवाकोट, पोखरा लगायतका ठाउँहरु घुमिसकेको छु । हरेक दुइ हप्तामा फरक यात्रा तय हुन्छन ।
कुन ठाउँ तपाईलाई विशेष मन पर्यो ?
यो एकदम गाह्रो प्रश्न हो मेरो लागि । नेपालका सबै ठाउँ मलाई उत्तिकै राम्रो लाग्छ । तर पनि मलाई पोखराको सौन्दर्यले यहाँ आइरहन मनलाग्छ । नेपालका कुनै पनि ठाउँ भन्दा धेरै पटक मैले पोखराको भ्रमण गरेको छु । यहाँको ताल, हिमाल, पहाडको सौन्दर्यले मलाइ यहाँ आउन मन लागिरहन्छ । हरेक ठाउँमा मेरो नया र फरक अनुभव छ । नेपालगञ्ज पनि मलाई उत्तिकै प्रिय लाग्छ । त्यहाँ हामी धेरै ठुलो प्रोजेक्ट लिएर पनि गएका थियौं । त्यसैले सबै ठाउँको आफ्नै विशेषताहरु छन् । सबै ठाउँहरु मलाई उत्तिकै प्रिय लाग्छ ।
पोखराको के कुराले तपाईलाई यहाँ आइरहन मन लाग्छ ?
नेपालको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो शहर पनि हो पोखरा । पोखराको सौन्दर्यले विश्वलाई नै आकर्षित गरिरहेको छ । प्राकृतिक दृष्टिकोणले यो शहर महत्वपुर्ण छ । यहाँको वातावरण पनि स्वस्थ छ । मेरो कामको लागि पनि पोखरा धेरै महत्वपुर्ण छ । पोखरा धेरै सुन्दर छ । सुन्दर हिमाल, सुन्दर दुष्यावलोकन, सुन्दर तालहरु, पहाडहरु अनि यहाँको आतिथ्यताले मलाई तानिरहन्छ । यहाँका मानिसहरुको भावना पनि सुन्दर लाग्छ । यो शहर रमाइलो पनि छ । एडभेञ्चर पनि छ । पोखरामा आएर मैले प्याराग्लाइडिङ्ग पनि गरेको छु । तालमा डुङ्गा सयर पनि गरेको छु । मैले मेरो गीतको भिडियो को सुटिङ्ग पोखरामै गरेको थिएँ । त्यसैले पोखरा मेरो लागि यादगार शहर हो ।
नेपालको बारेमा तपाई धेरै जानकार हुनुहुन्छ । संस्कृति पनि त्यस्तै बुझ्नुहुन्छ । नेपालको कुन चाडपर्व तपाईलाई विशेष मनपर्छ ?
मलाई यहाँ मनाइने सबै चाड मनपर्छ । किनभने ती सबै चाडहरुको आफ्नै साँस्कृतिक महत्व छ । तर पनि मलाई असाध्यै मनपर्ने चाड तिहार हो । किनभने तिहारको बेला देखिने झिलिमिली आकर्षक लाग्छ । अनि ५ दिन मनाइने तिहारमा हरेक दिनको महत्वले पनि मलाई खास लाग्छ । जस्तै, कुकुर तिहारको दिन कुकुरलाई गरिने पुजा, काग पुजा, गाइ पुजा, गोरु पुजा, भाइ पुजा, आत्मा पुजा । यसको आफ्नै अर्थ रहेको छ । यो निकै प्रतिकात्मक पनि छ । त्यसैले यो विशेष चाड हो ।
नेपालीहरु धेरै खुसी हुुनुहुन्छ । यहाँको जीवनशैली र यहाँका मानिसका स्वभावका कारण पनि धेरै अमेरिकीहरु नेपाल भ्रमणमा आउने गर्छन । यहाँका मानिसले अतिथीलाई गर्ने सत्कार अर्को सुन्दर पक्ष हो ।
नेपालको संस्कृतिलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
मेरो विचारमा अमेरिका र नेपालको संस्कृति अलि फरक तर अलि उस्ताउस्तै जस्तो पनि लाग्छ । मेरो लागि परिवारले विशेष महत्व राख्छ । नेपालमा पनि परिवारको महत्व ठुलो छ । नेपाल र अमेरिकाको संस्कृतिमा धेरै किसिमको विविधता रहेको छ । फरक जात, फरक धर्म, फरक चाड, फरक भाषा छ । यो किसिमको विविधताले हामीलाई सधैं नजिक बनाइरहेको छ ।
अमेरिका र नेपालको साँस्कृतिक समानता के पाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा ठुलो समानता भनेको विविधता नै हो । दुवै देशमा भौगोलिक विविधता, जातिय विविधता, धार्मिक विविधताहरु छन् । फरक किसिमका समानताहरु छन् । अमेरिकामा पनि क्यान्सेस र क्यालिफोर्निया विचको भौगोलिकता फरक छ ।
तपाईले नेपाली गीत पनि गाउनुभएको छ । नेपाली गीत प्रतिको रुची कसरी जाग्यो ?
मैले मेरो सहकर्मी सुनिल जी संग दुइ वटा गीत गाएको छु । नेपालको लोकप्रिय गीत सिरीमा सिरी गाएको छु । सबै देशको संस्कृति बुझ्न त्यहाँ प्रचलित गीतले भुमिका खेलेको हुन्छ । त्यहाँको मानिसका भावना बुझ्न पनि गीत बुझ्न जरुरी छ । त्यहाँका मानिसका भोगाइ, सोँचाइहरु अनि जीवन शैली पनि गीतले झल्काइरहेको हुन्छ ।
गीत गाउनुहुन्छ । रमाउनुहुन्छ । कुटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । तपाई व्यक्तिगत रुपमा कस्तो हुनुहुन्छ ?
म सबैसंग उत्तिकै रमाउन सक्ने मिलनसार छु जस्तो लाग्छ । गफ गर्न बढि रुचाउछु । मलाई मानिसहरुको कुरा सुन्न मनपर्छ । सोसियल मिडियामा रमाउन पनि मनपर्छ । म एकदम खुल्ला किसिमको व्यक्ति हुँ । नारीहरुको जीवनमा धेरै फरक भुमिकाहरु रहेको हुन्छ । म ममतामयी आमा हुँ । कुशल श्रीमती हुँ । म छोरी हुँ । म पेशाले कुटनीतिज्ञ हुँ । म कसैको दिदी हँु, साथी हुँ । त्यसकारण यि सबैको समन्वयका लागि म व्यस्त पनि छु । महिलाका लागि फरक किसिमको तनाव पनि आनन्द पनि छ । किनभने एउटा महिलाले धेरै किसिमको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
जीवन र प्रेमका बारेमा तपाइको विचार के छ ?
प्रेम र जीवनको संबन्ध गहिरो हुन्छ । प्रेमले कुनै पनि मानिसलाई खुसी बनाउछ । यो सर्वव्यापी छ । सबैले सबैलाई प्रेम गर्नु जीवन हो । मेरो श्रीमान पाकिस्तानी हुनुहुन्छ । उहाँ दक्षिण एशियाली संस्कृतिमा हुर्कनुभएको हो । त्यसकारण हाम्रो घरमा फरक किसिमको धर्म, फरक किसिमको संस्कृति अनि रहनसहन छ । मेरो छोराछोरीले यो सबैकुरा ग्रहण गरिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो ।
तपाई नेपाली भाषा राम्रो बोल्नुहुन्छ । भाषा सिक्न कठिनाइ भयो कि भएन ?
स्वभाविक रुपमा कठिन त भयो नै । अमेरिकामा नै मैले नेपाली भाषा सिक्ने मौका पाएँ । लगभग ९ महिना मैले त्यहाँ नेपाली भाषा सिकेँ । मैले दैनिक ५ घण्टा नेपाली भाषा सिक्थें । मलाई नेपाली भाषा धेरै मनपर्छ ।
नेपाली भाषा प्रतिको आकर्षण कसरी भयो ?
भाषा भनेको एकले अर्कोलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । जुन देशमा गइन्छ त्यो देशको भाषा, रहनसहन, संस्कृति बुभ्mनु आवश्यक छ । यसले कामलाई पनि सजिलो बनाउछ । मलाई नेपाली उखानहरु पनि मनपर्छ । उखानहरुले छोटो वाक्यमै धेरै कुराहरु भनिरहेका हुन्छन् । मलाई नेपाली उखानमा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने मनपर्छ । दुधको साक्षी विरालो भन्ने उखानले पनि अर्थहरु दिएको छ ।
नेपालीहरुको स्वभाव र जीवनशैली कस्तो पाउनुभएको छ ?
यहाँका मानिसहरुको स्वभाव र जीवनशैली धेरै राम्रो छ । नेपालीहरु धेरै खुसी हुुनुहुन्छ । यहाँको जीवनशैली र यहाँका मानिसका स्वभावका कारण पनि धेरै अमेरिकीहरु नेपाल भ्रमणमा आउने गर्छन । यहाँका मानिसले अतिथीलाई गर्ने सत्कार अर्को सुन्दर पक्ष हो । अतिथी देवो भवः भनेर पुज्ने कला यहाँको सभ्यता हो ।
तपाईको नेपालको बसाइले नेपालको जनता र अमेरिकी जनताको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन कस्तो भुमिका खेल्छ ?
अमेरिका र नेपाल विचको मित्रताको सम्बन्ध निकै पुरानो हो । हामी यो वर्ष देखि मित्रताको ७३ वर्ष मनाउदैछौं । अमेरिकी दुतावास खासगरि नेपाली जनताका लागि फरक किसिमको कार्यक्रम, विकासका कार्यक्रमहरुमा लक्षित छ । नेपाली जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हामी काम गरिरहेका छौं । सबै क्षेत्रमा हामी उत्तिकै सहभागी बनिरहेका छौं । अमेरिकी जनताको सहयोग र सदिक्षा नेपाली जनताका लागि सदैव रहनेछ ।
प्रस्तुती : सन्जयकुमार मल्ल